Dialogue that Matters: USAID Talks Tenure with University Students | LandLinks
Photo by: USAID Economic Growth Office
USAID Land Tenure Project အကြောင်းဟောပြောပို့ချမှုကို ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၅၀၀ နီးပါး၊ ပါမောက္ခတွေနဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တက်ရောက်လာကြသူတွေထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနတွေက ကထိကတွေနဲ့ အတူ ဘွဲ့ကြိုကနေ ပီအိပ်ခ်ျဒီ တန်း တက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ ပါဝင်ကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Nearly 500 students, professors and government officials attendedaseries of USAID Land Tenure Project lectures covering land governance, policy and law. Participants ranged from undergraduate students to doctoral candidates, along with Law Department lecturers from the University of Yangon, Mandalay University and Yezin Agricultural University. Burmese government authorities actively participated in the dialogue.
Learn more about USAID’s Land Tenure Project in Burma.